Arduino ပရိုဂရမ်းမင်း tutorial ကို အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
Arduino ၎င်းသည်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲစီမံကိန်းများသို့မဟုတ်ပလက်ဖောင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီး DIY ကမ္ဘာတွင်အများဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ အသိုင်းအဝိုင်းသည် microcontroller ကိုပရိုဂရမ်အတွက် open source ဆော့ဖ်ဝဲများနှင့်လည်းလွတ်လပ်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်မတူညီသောဟာ့ဒ်ဝဲပြားများကိုဖန်တီးထားသည်။ များစွာသော add-ons များနှင့်၎င်းတို့မှဆင်းသက်လာသောအရာများကိုလည်းဖန်တီးနိုင်စေရန် GNU GPL လိုင်စင်အောက်တွင်အားလုံးကလိုင်စင်ရသည်။
တကယ်တော့သူတို့ဟာအီလက်ထရွန်နစ်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကိုအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများစွာနဲ့နိုးထစေခဲ့တယ်။ ဦး ထုပ်သို့မဟုတ်ဒိုင်း သင်၏ Arduino ဘုတ်၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကို ၄ င်း၏ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ချက်များထက်ကျော်လွန်နိုင်သည်။ စက်ကိရိယာများအတွက်စက်ကိရိယာများ၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစီမံကိန်းများ၊ စတိတ်တာစသည်တို့ကဲ့သို့သောအလွန်တိကျသောစီမံကိန်းများစတင်ရန် (သို့) သယ်ဆောင်ရန်အတွက်ပစ္စည်းများများစွာကိုစတင်ခဲ့သည်။
3 Arduino ပရိုဂရမ်းမင်း tutorial:
3.1 download file ထဲမှာဘာတွေပါလဲ?
3.2 အခမဲ့ eBook နှင့် add-ons များကိုအခမဲ့ရယူပါ။
အဲဒီမှာ အမျိုးမျိုးသောအရာရှိတ ဦး က Arduino ပျဉ်ပြားစတင်ရန်သော်လည်းငါအသုံးပြုရန်အကြံပြုပါသည် Arduino UNO, ငါသင်ခန်းစာအတွက်အခြေခံအဖြစ်အသုံးပြုတယျ။ အထင်ရှားဆုံးသောသံမဏိပြားများမှာ -
Arduino UNO ဗျာ၃- ၎င်းသည်အားလုံးအကျဆုံးနှင့်အကျယ်ပြန့်ဆုံးအသုံးပြုသောပန်းကန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် 328Mhz ATmega16 microcontroller၊ SRAM ၏ 2KB နှင့် flash 32KB၊ digital I / O pins 14 နှင့် analog input များရှိသည်။
Arduino ကြောင့်- ၎င်းတွင် ၈၄ မမ်၊ SRAM ၉၆ ကီလိုဘိုက်နှင့် ၅၁၂ KB Flash တို့ပါ ၀ င်သော AT91SAM3X8E microcontroller ပါရှိပြီးပိုကြီးမားသောစီမံကိန်းများအတွက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောပရိုဂရမ်များကိုသင်မှတ်တမ်းတင်နိုင်လိမ့်မည်။ ထိုနည်းတူစွာ၊ digital I / O ဆက်သွယ်မှု ၅၄ ခုနှင့် Analog input 84 + Analogs output နှစ်ခုတွေ့လိမ့်မည်။
Arduino Mega: 2560Mhz ATmega16 microcontroller, SRAM ၏ 8KB, flash 256KB, 54 ဒစ်ဂျစ်တယ် I / O တံသင်နှင့် 16 Analogs သွင်းအားစု။ တနည်းအားဖြင့်ဒါဟာအလယ်အလတ်ရှုပ်ထွေး၏စီမံကိန်းများအတွက် Due နှင့် UNO အကြားအလယ်အလတ်မော်ဒယ်ပါလိမ့်မယ်။
Arduino Lilypad သင်၏ e-textile စီမံကိန်းများအတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောပတ် ၀ န်းကျင်သေးငယ်သည့်အရာသည်သင် ၀ တ်ဆင်နိုင်သည်။ အဲဒါဟာလုပ်လွယ်ပါတယ်။
ArduinoMicroဖြေ - နေရာကသော့ချက်ကျတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အခါ microcontroller ပါတဲ့ဘုတ်သေးသေးလေးတခုဖြစ်ပြီးနေရာသေးသေးလေးထဲမှာထည့်သွင်းဖို့နေရာသိပ်မယူတဲ့ဘုတ်တခုလိုအပ်တယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ထားတဲ့ Pro ဗားရှင်းရှိတယ်။ ၎င်းတွင် 32Mhz ATmega4U16 microcontroller နှင့်သင်ရောင်းချရန်လိုအပ်သော I / O pin များပါဝင်သည်။
Arduino Nano ပါ၎င်းသည် Micro ထက်ပိုမိုသေးငယ်သည့်ဘုတ်ပြားတစ်ခုဖြစ်ပြီး ATmega328 microcontroller နှင့်ဆင်တူသည့်အင်္ဂါရပ်များနှင့်ဈေးနှုန်းများရှိသည်။
Arduino Esplora။ အရင်ကုန်ကျစရိတ်တွေထက်အနည်းငယ်စျေးကြီးတယ်။ Leonardo ကိုအခြေခံထားတယ်။ UNO လိုစွမ်းဆောင်ရည်ရှိတယ်။ ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာတာ။ သို့သော်၎င်း၏ဒီဇိုင်းကိုပြန်လည်သက်တမ်းတိုး၊ လျှော့ချပြီးခလုတ်များ၊ mini joystick နှင့်အာရုံခံကိရိယာများကိုဘုတ်ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်ပေါင်းစည်းထားခြင်းကြောင့်ကွဲပြားသည်။ ထို့ကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်းစီမံကိန်းများအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်သည်။
သင်လည်းတွေ့လိမ့်မည် တရားမဝင်ပြားရပ်ရွာသို့မဟုတ်အခြားကုမ္ပဏီများမှဖန်တီးသည်။ သူတို့၏ဝိသေသလက္ခဏာများသည်အလွန်ဆင်တူပြီး Arduino နှင့်ပရိုဂရမ်းမင်းသို့မဟုတ်အီလက်ထရောနစ်အဆင့်များနှင့်လိုက်ဖက်ညီမှုရှိနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုသင်ရွေးချယ်လိုက်သောရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ်ထားခဲ့ပြီးပြီ။ ဒီအနကျအဓိပ်ပါယျအပျပျပျပျပျရပျမြားနှငျ့စတငျရမညျ့အကွောငျးကိုကြှနျုပျမကွံစမျးပါ။ ထို့အပြင်၎င်းတို့အနက်အချို့သည်စက်ရုပ်များ၊ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များစသည်တို့အတွက်အထူးသီးသန့်ဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်ရှိသည် အီလက်ထရောနစ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သင်၏ Arduino ဘုတ်ကို WiFi ဆက်သွယ်မှု၊ Bluetooth၊ မော်တာကိုထိန်းချုပ်ရန်မောင်းနှင်မှုစသည်တို့ကဲ့သို့သောအပိုစွမ်းရည်များပေးလိမ့်မည်။ လူသိအများဆုံးဒိုင်းများမှာ -
ဝိုင်ဖိုင် Shield- WiFi ဆက်သွယ်မှုကိုထည့်ရန်နှင့်အဝေးမှစီမံရန်သင်၏စီမံကိန်းကိုအင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်။
Ethernet ကိုကာကွယ်ပါ- ကွန်ယက်သို့ဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်မှု။
Proto Shield: သင်သည်သင်၏ဒီဇိုင်းများအတွက် breadboard သုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
နှင့်အများကြီး ပိုပြီးစခရင်များ၊ ကီးဘုတ်များကဲ့သို့ ...
မူအရ စတယ်, သင်သည်ဤပစ္စည်းအမျိုးအစားကိုစိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်မထင်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သင်ကနောက်ပိုင်းတွင်လိုအပ်လိမ့်မယ်။
Arduino Starter Kit။ ဒါကပန်းကန်လုံးပါ ၀ င်တဲ့အစုံအစုံလိုက်တစ်ခုပါ Arduino UNOအလွန်ပြည့်စုံသောလက်စွဲနှင့်အမျိုးမျိုးသောအီလက်ထရောနစ်ဒြပ်စင်အမြောက်အများ (resistors, capacitors, LED ဖန်သားပြင်များ၊ display များ၊ breadboard၊ LEDs၊ cable များ၊ diodes, transistor, buzzers, motor နှင့် servomotors, driver) စသည်တို့ဖြစ်သည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောပန်းကန်ပြားတစ်ချောင်းကိုသင် ၀ ယ်ရန်ရွေးချယ်ပါကသင်ဝယ်ယူရန်လိုလိမ့်မည်ဟုသတိရပါ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း အထူးပြုစတိုးဆိုင်များတွင်စီမံချက်တစ်ခုစီအတွက်သင့်အတွက်လိုအပ်သည်။ သင်သည် starter kit ကိုအသုံးချပြီးသည်နှင့်သင်၏စီမံကိန်းများကိုဆက်လက်ချဲ့ထွင်ရန်သို့မဟုတ်ဤကိရိယာကသင့်အားခွင့်ပြုသည့်အရာထက် ကျော်လွန်၍ လုပ်ဆောင်ရန်ပစ္စည်းများပိုမိုဝယ်ယူရန်စိတ်ဝင်စားသည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြင်သင့်တွင်လုံလောက်သောဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ရှိလျှင်လည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလိမ့်မည်။
Arduino IDE ကို: သင်လုပ်နိုင်သည် download လုပ်ပါ အမျိုးမျိုးသောပလက်ဖောင်းများအတွက်လုံးဝအခမဲ့။ PDF သင်ခန်းစာတွင် operating system တစ်ခုစီ၌မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နှင့်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုရှင်းပြသည်။
အာရပ်: Platform အမျိုးမျိုးအတွက် Java ရှိနောက်ထပ် plugin တစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်သည် ဆေးရုံကဆင်း အခမဲ့။ ပရိုဂရမ်ရေးသားရန်မလိုဘဲသင်၏ပရိုဂရမ်များကိုဖွဲ့စည်းရန်ပဟေpiecesိပုံစံများနှင့်ဆင်တူသည့်လုပ်ကွက်များကို သုံး၍ ဂရပ်ဖစ်အလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဤအရာအလုံးစုံ PDF ကိုရှင်းပြထားသည်။
အပူတပြင်း: သည်၎င်းတို့ကိုမတပ်ဆင်မီသင်၏ဆားကစ်၏ပုံရိပ်များသို့မဟုတ်ရှေ့ပြေးပုံစံများကိုသယ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုသည့်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားပါသည်။ ဒီမှာဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ.
အဲဒီလိုလုပ်ရင်မင်းမှာထက်ပိုပြီးလုပ်ရလိမ့်မယ် လုံလောက်စွာ စတင်ရန် ...
Arduino ပရိုဂရမ်းမင်း tutorial:
ဒီပလက်ဖောင်းဟာနှစ်ပေါင်းများစွာလည်ပတ်နေခဲ့ပေမဲ့အခုငါတို့ကိုစာဖတ်တဲ့လူငယ်တွေအများကြီးရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ Arduino ကိုအခြေခံပြီးစီမံကိန်းတွေကိုဖန်တီးနေတဲ့ထုတ်လုပ်သူများရဲ့ရပ်ရွာထဲကို ၀ င်ချင်တယ်။ ဒီတော့ အကယ်၍ သင်ဟာပရိုဂရမ်ကိုခြစ်ရာကနေစပြီးအဆင့်ဆင့်လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်၊ Arduino ပရိုဂရမ်တွင်အခမဲ့စာအုပ်။ သင်၏ပထမဆုံးဒီဇိုင်းများကိုစတင်တည်ဆောက်ရန်အတွက်သင်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးနှင့်အတူသင်လေ့လာပါလိမ့်မည်။
download file ထဲမှာဘာတွေပါလဲ?
အဆိုပါအတွင်း download လုပ်ပါ သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ဖိုင်များအများအပြားတွေ့လိမ့်မည်:
tutorial နှင့်အတူ eBook PDF ဖြင့် Arduino IDE နှင့် Ardublock ပရိုဂရမ်များ သင့်ရဲ့ PC ပေါ်မှာသုံးနိုင်မှစံ။
eBook သည်ယခင်စာအုပ်နှင့်တူညီသော်လည်းအရွယ်အစားသေးငယ်သည် သင့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များမှအသုံးပြုရန်ပေါ့ပါးသည်.
လင့်ခ်များကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ အစီအစဉ်များ လိုအပ်သော။
ကွဲပြားခြားနားသောဖိုင်တွဲ အရင်းအမြစ်ဖိုင်များကိုပုံကြမ်း ဥပမာအနေနဲ့ကြိုးစားကြည့်လို့ရတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်သင်ယူဖို့ပြင်ဆင်နိုင်တယ်။ Arduino IDE အတွက် code ရော Ardublock အတွက် code ရော Raspberry Pi နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အတွက်အချို့ကုဒ်များရှိသည်။
အခမဲ့ eBook နှင့် add-ons များကိုအခမဲ့ရယူပါ။
download လုပ်ပါ ဒီမှာ:
ဒါကမင်းကိုကူညီနိုင်လိမ့်မယ်လို့မင်းမျှော်လင့်ပါတယ် သင်၏ပထမဆုံးစီမံကိန်းများ။ မှတ်ချက်များကိုသင်၏ပထမဆုံးဒီဇိုင်းများဖြင့်ချန်ထားပြီးသင်၏ဖန်တီးမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်မျှဝေနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » Arduino » Arduino programming သင်ခန်းစာ
သင်က Capacitor ၏တန်ဖိုးနှစ်ခုနှင့်မြေပြင်နှင့်အပြိုင်ခုခံနိုင်သည့် TESTER ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ C = 470Mfx50V, R = 330k 1 / 4W, ၎င်းသည် input နှင့် output 3.5 AUDIO Jack နှင့်ဆက်သွယ်သည်။
မေးခွန်း ၃.၅ မှတဆင့်
Mario Piñonesဂ။ ဟုသူကပြောသည်
Mario Piñones c ကိုပြန်ပြောပါ။
သင်၏ Arduino EBOOK ဒေါင်းလုဒ် အလုပ်မလုပ်ပါ။
ငါကြိုးစားပြီး ငါ့အတွက် အဆင်ပြေတယ်။ ကြော်ငြာတစ်ခု အရင်ထွက်လာတာတော့ အမှန်ပါပဲ။
ဒါပေမယ့် လင့်ခ်ကို ဒုတိယအကြိမ် နှိပ်လိုက်တာက ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
သင်၏ကိုယ်ပိုင် pinhole ကင်မရာကိုပြုလုပ်ပါ